‘लकडाउन एउटा सिकाई पनि हो’ : प्राचार्य विजय जि.एम. - साक्षी खबर ‘लकडाउन एउटा सिकाई पनि हो’ : प्राचार्य विजय जि.एम. - साक्षी खबर
चैत्र २०, २०७६ | ८९३४ पटक पढिएको | साक्षी खबर
शिक्षकका कुरा, प्राचार्य गोरखा वोर्डिङ स्कुल तुलसीपुर
(कोभिड—१९)को विश्वव्यापी संक्रमणबाट जोगिन नेपाल सरकारले लकडाउन सुरु गरेको एक साता पार भैसकेको छ । यसबीचमा हतारहतारमा एक कक्षा देखि ९ कक्षा सम्मका विद्यार्थिहरुको वार्षिक परीक्षा सम्पन्न भैसकेपनि एसईई परीक्षा भने अझै पनि अन्योलमा छ । लकडाउनको समयमा विद्यार्थि र अभिभावक दुवैले यो समयलाइ एउटा नयां सिकाइका रुपमा पनि लिनुपर्दछ ।
अहिले अतालिने अवस्था होइन, तर सतर्कता भने अपनाउनै पर्ने समय हो । कोरोना भाइरसको अझै औषधि पत्ता लागेको छैन । नन मेडिकल उपचारबाट पनि यसबाट जोगिन सकिन्छ । यसमा विद्यार्थिहरुको अहम भुमिका हुन्छ । लकडाउनको समयमा धेरै विद्यार्थिहरु मोवाइलमा झुण्डिइरहेको अभिभावकले गुनासो गरीरहेका छन् । त्यो स्वाभाविकै हो । तर पनि विद्यार्थि भाइवहिनिहरु यसमा आफै जिम्मेवारी बन्नुपर्दछ । युवा अवस्थामा विभिन्न तरंगहरु आउन सक्छन् । कोरोना केहि पनि होइन भन्ने सोंच पनि आउन सक्छ, तर यो होइन । कोरोनालाइ विश्व स्वास्थ्य संगठनलेनै महामारीका रुपमा परीभाषित गरीसकेको छ । हजारौंको ज्यान गैसकेको छ भने लाखौंमा संक्रमण देखा परेको छ ।
यो विषम परिस्थीतिमा आफु जोगिन र अरुलाइ पनि जोगाउन लकडाउनको पुर्ण पालना गर्न मैले विद्यार्थि भाइबहिनिहरुलाई आग्रह गर्दछु । विद्यालयहरु बन्द छन् । तपाई घरमै हुनुहुन्छ । तपाई इन्टरनेटको पहुंचमा पनि हुनुहुन्छ । यो अवस्थामा सवैभन्दा पहिले इलर्निङलाइ फलो गर्नुस् । एसइइ परीक्षा दिने विद्यार्थिहरुले पहिले अध्ययन गरेका कुराहरु रिभ्यु गर्नुस् । खाना पकाउन पनि सिक्न सक्नुहुन्छ । घर वरपरको करेसावारीमा काम गर्न सक्नुहुन्छ । आफ्ना कपडा आफै सफा गर्नुस् । घरवरपर सरसफाइ गर्नुस् । वोरीङ फिल भएको अवस्थामा सिनेमा हेर्न पनि सक्नुहुन्छ ।
हो कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीले वाल मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पनि परेको छ । यसमा अभिभावकहरुले पनि विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । वालवालिकामा त्रास होइन, महामारीबाट लड्ने भरोसाको वातावरण सृजना गराउन सक्नुपर्दछ । पोसिलो खाना खाने विषयमा वालवालिकालाइ आश्वस्त पार्न सक्नुहुने छ । पारिवारीक मनोरञ्जनमा समय बिताउन सिकाउनुहुने छ । ताकि बालबालिकामा मनोवैज्ञानिक भयको अन्त्य होस । बालबाालिकाहरुलाई खेलौना बनाउन सिकाउनुस्, राम्रा चित्र बनाउन सिकाउनुस् । विश्वका अचम्मका कुराका विषयमा जानकारी गराउनुस् । समय धेरै छ । घरमै पनि सृजनात्मक बनाउने यो एउटा उपयुक्त अवसर पनि हो । आफु पनि बचौं, अरुलाइ पनि बचाऔं ।